Author: Zuzil Mukinos
Qodobka 60aad ee dastuurka Puntland asna wuxuu caddaynayaa in aan marnaba la kordhin karin tirada 66 ka xubnood ee baarlamaanka Puntland, illaa la dhammeeyo tirokoob dadka deegaanka, la abuuro oo ay hawlgalaan xisbiyo siyaasadeed oo caburin ka madaxbannaan, deedna la galo doorasho madaxbannaan. Muwaadin kasta waxaa puntlanv ku ah: Somali government plans to end the transition period – HOL.
Qoysku wuxuu ka kooban yahay nin iyo haweeney qaangaaray oo si dasguurka waafaqsan isku guursaday iyo carrurtooda. Mashruuc sharci ee ku saabsan cashuur, kharashka dawladda, difaaca dalka ama amniga, muwaadiniintu ma soo jeedin karaan.
In uu ansaxiyo xaalad dagaal iyo meelmarinta heshiis nabadeed marka uu Golaha Xukuumadda soo jeediyo. Punland waxay Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ay la wadaageysaa Calanka guud ee Soomaaliya, Astaanka iyo Heesta Qaranka, iyadoo kuweeda u gaarka ahna leh. Dawladda Puntland waxay yeelaneysaa Maxkamad Dastuuriga ah, garsoorayaasheeduna waxa ay ka koobnaanayaan garsoorayaasha Maxkamadda Sare oo lagu kordhiyo afar 4 garsoore oo bulshada punntland soo dhex xulay.
Xeer-Ilaaliyaha Guud iyo Ku-Xigeenkiisa waxaa xilka lagaga qaadi karaa marka ay dhacdo mid ka mid ah sababaha ku cad qodobka aad ee Dastuurka, ayna soo jeediso Xukuummadda, Golaha wakiilladuna oggolaado. Guddiga waajibaadkiisu waxa ay noqonayaan in ay Dawladda kala taliyaan arrin kasta oo khuseysa Shareecada Islaamka, gaar dastujrka marka looga baahdo iswaafajinta Shareecada Islaamka iyo Xeerarka Puntland.
Waxaa reebban shaqada wax u dhimaysa carruurta noloshooda, caqiidadooda, dhaqankooda, korriimadooda iyo waxbarashadooda. Dhammaan Xisbiyada siyasadda ee doorashooyinka ka qaybgelaya waa inay fursad siman u leeyihiin warbaahinta Dawladda marka lagu jiro ololayaasha doorashooyinka. Bankiga Dhexe waxaa hawlihiisa haga Guddi Maamul Board of Directors oo ka kooban toddoba 7 xubnood oo kala ah: Madaxweynuhu wuxuu curiyaa ama oggolaadaa, si waafaqsan Dastuurka iyo shuruucda dalka, siyaasadda xukuumaddiisu fulinayso ee la xiriirta waaxyaha maamulka guud, fulinteedana ku kormeeraa iyadoo ay ujeedadu tahay in dadweynaha Puntland gaaraan horumar puntlannd oo dhan kasta ah.
Madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa ka dalbaday wadamada bariga Afrika inay taageeraan nabad u raadinta Soomaaliya. In qofku ku jiro xabsi xukun-suge ah ama mid maxkamadi ku xukuntay. Waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa wakiilo ka socday beesha caalamka sida Qaramada Midoobay iyo Midowga Africa. Xubintii muddadaas lagu soo magacaabi waayo halkeedii waa ay bannanaanaysaa ilaa laga soo magacaabayo. Xafiiska uu qoraalka cabashadu u socdo waa inuu ka jawaabo 45 beri gudahood.
Xasaanaddu waxa ay leedahay heerar kala duwan. Codsiga waa inuu la socdo soo jeedinta mashruuc sharci ah iyo magacyada ugu yaraan laba qof oo lagala xiriiro.
Marka dadweynaha Soomaaliyeed afti ku meelmariyo Dastuurka Jamhuuriyadda federalka Soomaaliya, ayaa Golaha Wakiillada ee Puntland wuxuu puntoand guddi gaar ah oo ka kooban xubno ka tirsan Golaha Wakiillada iyo xubno isugu jira Aqoonyahanno sharci iyo Garsoorayaal ay xukuumaddu soo jeediso, si ay dib u eegid ugu sameeyaan dastuurka puntland una hubsadaan arimaha ay ku kala gadisan yihiin labada Dastuur, inta aynan ogolaan Dastuurka Fedaraalka.
Xeerar iyo nidaamyo ayaa lagu maamulayaa axsaabta siyaasadeed, kuwaasoo lagu qeexayo shuruuc kala gadisan oo ay Xukuumaddu soo jeediso, Golaha Wakiilladuna ogolaado.
Isu dheelitiridda awoodaha Dawladda: Shaqaale puntand waxa uu xaq u leeyahay mushahar u dhigma shaqada uu qabto. Qof kasta waxa uu u madaxbannaan yahay inuu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu rabo iyo inuu dalka ka baxo kuna soo laabto goortii uu doono.
Maxkamadaha Ciidamada waxay awood u leyihiin oo qura qaadista dambiyada ciidamadu galaan oo sharcigu qeexayo. Garsoorayaashaasi waa in ay haystaan shahaado qaanuun ee la aqoonsan yahay ama in ay faham ballaarn u leeyihiin Shareecada Dsstuurka.
Sarkaal ama shaqaale kasta ee dawladeed oo si xun u maamula, lunsada lacag, hanti kale ee ummadeed ama ka qaybgala fal-dembiyeedyadaas, wuxuu geystay dembi culus, wuxuuna mudanayaa ciqaab u dhiganta faldembiyeedka uu galay sida uu qabo Xeerka Ciqaabta iyo inuu soo celiyo dhammaan hantidii uu dayacay ama lunsaday. Muddada xilhaynta xubnaha Maxmadda Sare ee rasmiga ah iyo kuwa kaydka ahba waa shan 5 20012, marka laga reebo doorashada koowaad oo noqonaysa sida soo socota: Today from Hiiraan Online: Afarta xubnood ee Maxkamadda Dastuuriga ah ee laga soo xulay bulshada waxay dhammaan xuquuqda kala mid yihiin garsoorayaasha Maxkamadda Sare.
Qodobka 84aad Xilka Wasiir ku-Xigeenka 1. Dawladda Puntland waxaa lagaga dhaqmayaa nidaamka xisbiyada badan. In uu wakiil uga noqdo Dawladda Puntland maxkamadaha hortooda markii ay jirto dacwad ay dawladdu dhinac ka tahay iyo mar kastoo dawladdu galeyso heshiis ay wax isaga gadeyso dastuurma ay ku gadaneyso hanti maguurto ah. Xeer ayaa xadaynaya hantida gaarka ah ee loola wareegi karo dan puntlabd iyo habraaca loo marayo qaramaynteeda.
Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah Isimada Puntland iyaga oo sheegay in ay ku qanacsan yihiin qaabka loo soo xulay ergooyinka ansaxin doona dustuurka Puntland iyaga oo ku booriyey ergooyinka in ay ka foojignaadaan in ay ansaxiyaan wax dhib u keenaya dadka iyo dalkaba. Dastuurka Puntland ayaa ku salaysanyahay deegaan ama gobolaysi, xubnaha baarlamaanka Puntland ayaa ayana lagu soo doortaa hab deegaan, wixii tabasho ahna ay waligeed beeluhu si gooni ah uga shiraan dhexdooda, badanaana wixii muran gala waxaa loo qaybsadaa si meerto ah.